Na eo aza ny fepetra tsy maintsy arahana noho ny COVID-19, nihetsika tao Madrid ihany ireo mpanohana ny farany havanana ao Espaina · Global Voices teny Malagasy
Fiara 6.000 nitety an'i Madrid nitaky ny fialàn'ny filoha
MpanoratraAmaya Hernández Suescun
Voadika ny 07 Jona 2020 17:59 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, русский, عربي, Ελληνικά, Français, Español
Famoriambahoaka nokarakarain'ny VOX tamin'ny 03.06.2018. Sary nomen'ny: Vox España/Flickr, Sehatra ho an'ny daholobe.
Raha manalefaka tsikelikely ireo fepetra noraisiny noho ny fisian'ny coronavirus i Espaina, fiara 6000 no niantsona tao afovoan-tanànan'i Madrid nitaky ny fametraham-pialàn'ny filoha Pedro Sánchez sy ireo minisitra miaraka aminy.
Tamin'ny fikiahana ny teny faneva toy ny hoe “fahalalahana”, “fametraham-pialàna”, sy “Sanchez, miala izao dieny izao”, no sady nilanja ny sainam-pirenena Espaniôla ary saron-tava, nivoaka nanohitra ny fandraisana an-tànana ataon'ny governemanta manoloana ilay valanaretina ireo mpanao hetsipanoherana. Notakian-dry zareo ny hiverenana amin'ny fahalalahan'ny tsirairay sy ny fanokafana indray ny toekarena mba hisorohana ny fidinan'i Espaina ho lasa “Firenena Tsy Mandroso”.
Ilay hetsipanoherana, izay ny VOX antoko avy amin'ny elatra farany havanana no niantso azy, dia natao niaraka tamin'ireo olompirenena nampiasa ny fiarany mba hiantohana ilay fepetra elanelana ara-tsosialy tsy maintsy hajaina mandritra ilay valanaretina. Na dia efa izany aza no natao, marobe ireo tsy nanaja ireny fepetra ireny niala tao anatin'ny fiarany.
Nandritra ny fifidianana solombavambahoaka farany teo, ny 10 Novambra 2019, nahazo toerana 52 ny VOX ary lasa ho ny hery fahatelo lehibe indrindra ao amin'ny Parlemanta Espaniôla. Mitombo be ilay antoko ary ampangaina ho mampiasa kabary fandresena lahatra nasiônalista, mpanavakavaka ary mpanilika vehivavy mba hanosehana ny hafatra pôlitika tiany hiampita. Hita ao anatin'ny sasany amin'ireo fepetra narafiny tao anatin'ilay hafatra nataony ho an'ny fifidianana tamin'ny 2019 ny hanenjehana ireo antoko pôlitika izay “manohy manimba ny maha-iray tsy mivaky ny faritry ny firenena”, ny fandroahana ireo mpifindra monina tsy ara-dalàna ary fanilihana azy ireny tsy ho anatin'ny fiahiana ara-pahasalamàna eo amin'ny firenena, fanakatonana maoske, fanafoanana ny lalàna momba ny herisetra natao noho ny maha-lahy na maha-vavy, fandraràna ny fanalànjaza, ary fananganana Ministera iray hisahana ny Fianakaviana mba ho fiarovana ny “ankohonana voajanahary”.
Namakivaky ireo faritra tao afovoan-tanànan'i Madrid ireo mpanao hetsipanoherana, faritra onenan'ireo mpanefoefo mpomba ny VOX. Tao Plaza de Colón, nisy fiarabe tsy mitafo napetraka, ka teo no tazana ireo mpitarika ny VOX, isan'izany ilay mpitarika ny antoko Santiago Abascal.
Fihetsiketsehana. fiara fitaterana VOX. Ho ela velona i Espaina
Nohalefahana tamin'ny 11 May ireo fepetra tao amin'ilay tanàna izay isan'ny voadona mafy indrindra ary afaka niverina nanokatra tamin'ny ampahany ireo fandraharahàna madinika, teo ambany fanarahana antsakany sy andavany ny fepetra fiarovana. Kanefa, mbola mandeha miadankadana eo ny fisokafan'ilay tanàna. Niteraka resabe ilay fihetsiketsehana nataon'ny VOX noho ny loza mitatao entin'ny hamaroan'ny vahoaka, ny fahalotoana aterak'ireo fiara an'arivony, ny rivo-piainana toa mivolon'andro fety, ary ireo antson‘i Abascal ho an'ireo Espaniôla rehetra mba “hirotsaka an'arabe” mandritra izao fotoana isian'ny valanaretina izao. Nisy ihany koa fihenjanana rehefa injay nikasi-tànana ny mpanao gazety iray avy amin'ny La Razón ireo mpanao fihetsiketsehana, ary nilàny sotasota ireo mpanao gazety hafa avy amn'ny RTVE.
” Pelaka, Kaominista.”
Io no niaretan'io mpanao gazety avy amin'ny @rtve io. Tsy ela akory izay, nahita isika sary mitovitovy amin'izany nampiarahana tamina saina maro hafa ary teny an-tampon'ny lohantsika ny tànantsika.
Ireo mitaky fahalalahana no sady tsy mampihatra azy io akory no mitady hanery ny fametrahana lasitra fiarahamonina avy amin-dry zareo
Misoratra ao anatin'ny lalàm-panorenana ny zo ho afaka manao fihetsiketsehana, saingy noho ny toedraharaha manokana iainan'izao tontolo izao dia tonga ny resabe sy adihevitra. Tamin'ny fotoana nanoratana, nànana tranga 287.740 voamarina i Espaina, ka 27.133 no matin'ny COVID-19.
Io fitanjozorana fiara io no teboka farany ambony tamin'ny resaka fihetsiketsehana fanoherana ny fitondràna nanomboka tamin'ny 14 May tao Salamanca mpifanolo bodirindriny aminy, izay ny 70% amin'ireo mponina ao no nifidy ho an'ny elatra havanana sy ireo antoko mpifikitra amin'ny nentin-drazana nandritra fifidianana solombavambahoaka farany teo. Nanomboka teo, isanandro rehefa amin'ny 9 ora alina, marobe ireo olompirenena no midina an'arabe na eny an-davarangan-dry zareo mively kaserôly sy lapoaly, mitaky ny fialàn'ny lehiben'ny governemanta — mahatonga ny fihenjanana politika efa henjana sahady ho vao mainka hiharatsy.
Hatramin'ny nanaovan'i Pedro Sánchez fianianana amin'ny maha-filoha azy, tamin'ny 7 Janoary 2020, nanomboka nanangana governemanta iaraha-mitantana izy, iarahany amin'ny antoko ankavia Unidas Podemos. Setriny, nanomboka nanamafy ny kabariny manohitra ny governemanta ny antoko avy amin'ny hery ankavanana espaniôla. Ety anaty tambajotra sôsialy, antsoin'ny farany havanana ho “mpanongana fanjakana“, “tsy mamim-bahoaka”, ary “jiolahimboto” mihitsy aza ny governemanta sy ireo mpikambana ao anatiny.
Inona no atao hoe VOX?
Teraka tany amin'ny faran'ny taona 2013 ny antoko farany havanana VOX, saingy tany amin'ny faran'ny 2018 vao nahatafiditra solontena 12 tao amin'ny Parlemanta Andalous , sambany teo amin'ny tantarany. Nandritra ireo fifidianana solombavambahoaka vaovao sy farany natao tamin'ny 10 Novambra 2019, [esp] nahatafiditra solombavambahoaka niisa 52 ny VOX ary nijanona ho ny hery fahatelo ao anatin'ny Parlemanta espaniôla.
Tao anatin'ny hafatra nasiônalista, mpanavakavaka ary tsy manome haja ny vehivavy no nivelaran'ilay antoko. Isan'ireo fepetra sasany noraisina tao anatin'ny fandaharanasany nandritra ny fampielezankevitra tamin'ny fifidianana natao ny 2019 ny fanaovana ho tsy ara-dalàna ireo antoko pôlitika izay “manohy manimba ny tany maha-iray tsy mivaky ny Firenena”, ny fandroahana ireo mpifindramonina tsy ara-dalàna, ny fialàn-dry zareo tsy ho ao anatin'ny rafitra nasiônaly misahana ny fahasalamàna, ny fanakatonana maoske, ny fanafoanana ny lalàna momba ny herisetra mifototra amin'ny maha-lahy na vavy, ny fandraràna ny fanalàna zaza na ny fananganana ministera iray hisahana ny fianakaviana mba hiarovana “ny ankohonana voajanahary”. Fanampin'ny iray tamin'ireny fepetra ireny ireo tena vao haingana indrindra sy tena naha-be resaka, ilay lazaina fa “paingotry ny ray aman-dreny” [esp]. Ny tanjony tamin'io tolodalàna io dia ny hanaovan'ireo ray aman-dreny sonia fanomezandàlana iray hahafahan'ireo ankizy handray anjara amina hetsika na kaonferansa karakaraina any an-tsekoly, handraràna azy ireo araka izany tsy hanaraka fiofanana momba ny fahasalamàna ara-pananahana na ny fahasamihafàna.
Marobe ny olona ao amin'ny Twitter no maneho hevitra manohitra ny fihetsiketsehana nataon'ny VOX, indrindra fa nokianin-dry zareo ny nampiasàn'ny antoko avy amin'ny hery ankavanana ny sainampirenena espaniôla, izay nofaritan'ny maro ho toy ny fakàna tsy ara-dalàna ny maripamantarana ny firenena ho amin'ny tombontsoan'antoko, toy izay nitranga rahateo nandritra ny fifidianana tamin'ny 2015 rehefa nampidirin'ilay antoko tao anatin'ny fampielezankeviny ny sainampirenena.
Mahamenatra ny fampiasàna sainampirenena nataon'ireo mpanao hetsipanoherana avy amin'ny VOX, fa tsy ilay maintso izay azy ireo manokana. Hahatonga ireo Espaniôla marobe izay tsy mpiaraka amin'ny VOX hihevitra ny sainampirenena espaniôla ho marika famantarana ny elatra havanana io (“Azor effect”)
Na izany aza, misy olona hafa fantadaza, toa an'i Pepe Reina, izay mpiandry tstokazo fahiny tao amin'ny ekipam-pirenena espaniôla, hanohana ireo hetsipanoherana.
Ah! Araka izany, toa mivoaka eny an'arabe daholo ny olona rehetra, sa tsy izany?
Saingy misy ihany koa ireo feo mitsikera ny fifanoheran-kevitra iray eo amin'ny fanoheran'ny VOX momba ilay fihetsiketsehana feminista nidadasika be natao tamin'ny 8 Martsa ary ny nanaovan-dry zareo hetsiaka mitovitovy amin'izany ho an'ny daholobe amin'izao fotoana izao.
Vox tamin'ny 8 Martsa vs Vox amin'izao fotoana izao
Marobe ireo mpikambana ao amin'ny kaongresy avy amin'ireo antoko politika Más País, Unidas Podemos sy Esquerra Republicana, no samy nanome ihany koa ny heviny tao amin'ny Twitter:
Ny “Tanindrazana” dia ny fikarakaràntsika tena. Tsy misy idirany amin'ilay diabe tsy firaisankina amin'ireo tovolahy ireo
Ny “fihetsiketsehana” nampiasàna fiara nataon'ny VOX dia nibahana ny fandehanan'ny fiara iray mpitatitra marary.
Tsy afaka nisy fanoharana hafa netinety kokoa noho ity ve?
Viriosy ihany koa ny fasisma